कास्कीमा पनि फुट्यो एमाले, बन्यो समान्तर कमिटि ! - Baikalpikkhabar
कास्कीमा पनि फुट्यो एमाले, बन्यो समान्तर कमिटि !
नेकपा एमालेबाट निलम्बित पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले समानान्तर कमिटी गठनको अभियान सुरु भएको घोषणा गरेका छन् । नेता नेपालले कास्कीबाट छुट्टै समानान्तर कमिटी गठन सुरु भएको घोषणा गरेका हुन् ।
धनराज आचार्यको नेतृत्वमा नेता नेपाल समुहले ७५ सदस्यीय कमिटीको घोषणा गरेको हो । यसैबीच पार्टीबाट निलम्बित नेता नेपालले केन्द्रमा पनि नयाँ कमिटी घोषणा गर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर केन्द्रमा नयाँ कमिटी गठन गर्ने तयारी सुरु भइसकेको नेपालले जानकारी दिएका हुन् ।
जिल्लामा संगठित भएर कमिटीका बैठक नियमित गर्न उनले आफू पक्षीय नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए । आफूलाई युवाले साथ दिइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीको कारवाहीबाट नभाग्ने तथा नडराउने समेत नेता नेपालले स्पष्ट पारेका छन् ।
बिहिबार, १९ चैत, २०७७, दिउँसोको ०४:४१ बजे